Iinyembezi zikaShiva, ukurhanela kunye namayelenqe kwisitayile saseMallorcan | Uncwadi lwangoku
Iinyembezi zikaShiva (2002) yinoveli yesibhozo epapashwe ngumbhali waseSpain uCésar Mallorquí. Libali lokuthandabuza kunye nokuthandabuza, apho ubudlelwane phakathi kosapho kunye nemfihlakalo zilawula umsonto obalisayo. Ngokunjalo, kuyo yonke imixholo yesicatshulwa enje ngobuhlobo, uthando olungavumelekanga kunye nokuphakanyiswa okuveliswa kukutyhilwa kwemfihlo kuyathethwa ngako.
Umntu ophambili weyelenqe nguJavier, Umntwana oneminyaka elishumi elinesihlanu usebenze kakhulu kwiimfanelo zakhe zesikolo kwaye uyakuthanda ukufundwa kweentsomi zesayensi. Nguye ophetheyo ukubala kumntu wokuqala -minyaka eliqela kamva- Iziganeko ezenzekileyo okoko wafika eSantander ngehlobo lowe-1969. Iya kuba lixesha lasehlotyeni elingenakulibaleka kwaye lizele ziziyolo ezinomdla.
1 Malunga nombhali, uCésar Mallorquí
1.1 Intatheli, intatheli kunye nombhali wesikrini
1.2 Umsebenzi wokubhala kunye nokwamkelwa
1.2.1 Eyona misebenzi ibalaseleyo
2 Uhlalutyo lweenyembezi zikaShiva
2.2 Ubume, ixesha kunye nendawo
3.2 Imfihlelo yengcwaba elingenanto
3.3 Igama elinamabala
3.4 Uthando olungavumelekanga
3.5 Ileta kunye nokubonakala kwendalo
3.6 Ukuphela kobutshaba
Malunga nombhali, uCésar Mallorquí
Uzalelwe eBarcelona ngoJuni 10, 1953, uCésar Mallorquí del Corral wakhulela kusapho oluthambekele kuncwadi. Ngapha koko, utata wakhe wayengumbhali uJosé Mallorquí (owaziwa ngokuba ngumdali we Inkcenkce). Ngaphandle kokupapasha amabali akhe okuqala eselula, umbhali oselula waseCatalan akazange athathe isigqibo malunga nomsebenzi wobumba.
Intatheli, intatheli kunye nombhali wesikrini
UMallorquín wafunda ubuntatheli kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid (wayehlala nosapho kwikomkhulu laseSpain ukusukela ngonyaka omnye ubudala). Kukho kwakhona Wayesebenzisana ekubhaleni izikripthi zenethiwekhi ye-SER xa wayeneminyaka eyi-19. Emva kokuthweswa isidanga, wasebenza njenge ntatheli phantse iminyaka elishumi de waya emkhosini emva kweminyaka yee-70.
Ngexesha le-1980s, uMallorquí wayesebenza ikakhulu kwilizwe lentengiso kunye nokudala iincwadi zeempendulo zikamabonwakude. Kamva, Kwii-90s zakuqala, waqala wazithathela ingqalelo yokuba ngumbhali oqeqeshiweyo. Emva koko, ephenjelelwe ngababhali abanjengoBorges, uBester noBradbury, phakathi kwabanye, wayame kwinyani yesayensi nakwiziqendu zefantasy.
Umsebenzi wokubhala kunye nokwamkelwa
Phambi kokupapashwa kwinoveli yakhe yokuqala, Intonga yentsimbi (1993), uCésar Mallorquí wayesele efumene amabhaso aliqela ngomsebenzi wakhe njengombhali wescreen. Phakathi kwabo, iAznar Award ka-1991 Umhambi olahlekileyo, kunye ne-Alberto Magno Prize 1992 kunye ne-1993 Udonga lomkhenkce y Umntu oleleyo, ngokulandelelana. Incwadana yakhe yokuqala yokuphumelela ibhaso Umqokeleli wesitampu (Ibhaso le-UPC 1995).
Ngapha koko, esi sihloko sokugqibela sasithetha indawo yokuthatha umsebenzi wakhe wokubhala. Lilonke, sele epapashe ngaphezulu kweshumi elinambini lezicatshulwa ngokusayina kwakhe, kubandakanya ii-anthologies ezimbini, i-trilogy kwaye uthathe inxaxheba kuphuhliso lweencwadi ezine ezidibeneyo. Ngo-2015, wonke umsebenzi wombhali waseCatalan waqwalaselwa Umvuzo weCervantes Mfo.
Iinyembezi zikaShiva Ibe yenye yezona zinto zikhutshelwa kakhulu eCésar Mallorquí ngabagxeki kunye nabafundi. Akumangalisi ukuba esi sihloko siphumelele i-Edebé de Iincwadi zoLutsha 2002 kunye neLiburu Gaztea 2003. Nangona, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona ncwadi yakhe yanikezelwa Isiqithi saseBowen (2012), ophumelele la mabhaso alandelayo:
Ibhaso likaEdebé loNcwadi loLutsha ngo-2012.
Itempile yeBhaso lamawaka leMinyango ka-2012.
Uluhlu lwembeko Ibhodi yeHlabathi yeencwadi zaBantu aBancinci
Ibhaso likaZwelonke loNcwadi loLutsha ngo-2013.
Uhlalutyo Iinyembezi zikaShiva
Ungayithenga le ncwadi apha: Akukho mveliso ifunyenweyo
Ulwimi olusetyenziswe ngumbalisi oyintloko luqhelekile kwinkwenkwana eneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala. Nangona kunjalo, ngenxa yokuzinikela kwakhe kwiincwadi, uJavier uyakwazi ukuthetha ngesichazi-magama esidala esixubene nezinye zeempawu zejoggial. Nangona bengahlali rhoqo, kukho amacandelo apho umbhali abonisa ulwimi olunenkcubeko kakhulu, eneengxoxo ezicaciswe kakuhle.
Ubume, ixesha kunye nendawo
Ekuqaleni kwebali, umlinganiswa ophambili useMadrid. Kodwa, ngenxa yokoyika ukubamba isifo sephepha kuyise, UJavier uthunyelwa eSantander. Ngokukodwa, Kwindlu katat'omalume -Villa Candelaria, indlu yenkulungwane ye-1969- phakathi kukaJulayi noSeptemba XNUMX. Uninzi lweziganeko ezichaziweyo zenzeka kuloo propati kwizahluko ezilishumi elinambini ezenza inoveli.
Kunye noJavier okhankanywe apha ngasentla, ukukhula kwebali kubandakanya UVioleta Obregón, intombazana eneminyaka elishumi elinesihlanu ekrelekrele ngokuziphatha kancinci nokuzikhukhumalisa. Bobabini banoxanduva lokutyhila imfihlakalo yokunyamalala kukaBeatriz Obregón kunye namatye anqabileyo abizwa ngokuba ziinyembezi zeShiva.
URosa Obregón onomdla yenye into efanelekileyo; Unomdla kunye noGabriel, owamazibulo kaMendoza. Kodwa luthando olungavumelekanga ngenxa yobutshaba obukhoyo phakathi kweMendoza kunye nosapho lakwa-Obregón ngaphezulu kweminyaka engamashumi asibhozo. Ukongeza, umsebenzi uvela kwabanye abalinganiswa abanobunzima obubalulekileyo:
"Umvukeli" uMargarita Obregón.
UAlberto, umntakwabo Javier.
Kwizahluko ezithathu zokuqala, uJavier uxela ngexesha lokuthunyelwa kwakhe eSantander kunye nomkhuluwa wakhe, UAlberto (oneminyaka eli-17 ubudala). Kwezi ndinyana uchaza ukugula kukayise, imbonakalo-mhlaba kunye neenkcukacha zokudluliselwa kwakhe. Ukufika kwakhe kumazwe aseCantabrian, wadibana noomalume bakhe uAdela noLuis kunye neentombi zabo: URosa (18), uMargarita (17), uVioleta (15) noAzucena (12).
Nje ukuba ifakwe kwiVilla Candelaria, UJavier waqala ukuziva engaqhelekanga (ukumiliselwa livumba elinzulu lesifo sephepha) kwaye barekhode ezinye zeziganeko ezinomdla. Kwakumalunga nomzala wakhe uRosa wokubaleka ebusuku. Kanye nokwakhiwa kwesixhobo esinyakazayo esingapheliyo ngumalume wakhe uLuis kumasifundisane ongaphantsi wedolophu.
Imfihlelo yengcwaba elingenanto
Ngexesha lotyelelo lwasekhaya mausoleum, uVioleta uxelele uJavier ibali likaBeatriz Obregon. Iminyaka engamashumi asibhozo eyadlulayo U-Beatriz wayemiselwe ukuba atshate u-Sebastián Mendoza (owamnika umgexo we-emerald okrwada ukubonisa uthando lwakhe). Kodwa, kungekudala ngaphambi komtshato, uBeatriz wanyamalala kwaye iMendoza yafuna ukubuyiselwa kwengubo exabisekileyo.
Isiqendu esenziwe nguCésar Mallorquí.
Xa amatye axabisekileyo engakhange abonakale nawo, uMendoza watyhola uBatriz ngokusinda kunye neenyembezi zeShiva. Okwangoku, uRosa waqhubeka nokuthandana kwakhe okungavumelekanga (kunye noGabriel Mendoza), kanye noVioleta noJavier besondela ngenxa yokuthanda uncwadi. Ngelixa intombazana yayigxotha uhlobo lwenzululwazi.
Emva kokubuza imibuzo kwizibuko laseSantander, UVioleta noJavier bacinga ukuba uBeatriz ubalekile kwinqanawa egama linguSavanna. Apho, mhlawumbi, lo mfazi ngewayebulewe ngumphathi ukuba ebe iimpahla zakhe. Ngeli xesha, uJavier ubalisa ngendlela awangqina ngayo kumabonakude ukususwa kwesiphekepheke sika-Apollo XI esiya enyangeni (kamva ukubuyela nokubuya kuyabaliswa)
Igama lavela kwisibuko sokuhlambela emva kokuba uJavier ehlambile. Ke, uVioleta ucinga ukuba uyisombulule ingxaki. Emva kwexesha, ukuthandana phakathi kukaGabriel noRosa kwavela ngaphambili, Ke ngoko, isikhundla sokuthintela kunye nentiyo phakathi kweentsapho zikaMendoza kunye ne-Obregon zaqinisekiswa kwakhona. Ngenxa yoko, ngesicelo sikaRosa, uJavier wenza njengoposi phakathi kwabathandi.
Emva koko, UJavier noVioleta badibana no-Amalia Bareyo, isicakakazi sika-Obregon ngexesha lokunyamalala kukaBeatriz. UNksk. Wachaza indlela ii-Obregons ezazicaphuke ngayo, ngaphandle kuka-Beatriz, kodwa wala ukulandela incoko xa amakhwenkwe akhankanya i-Savanna.
Ileta kunye nokubonakala kwendalo
Ukufuna ukwazi kukaJavier noVioleta kwabakhokelela ekubeni bafumane uthotho lweeleta ezifihliweyo esiqwini. Iileta zatyhila uthando oluphindaphindeneyo phakathi kukaBeatriz kunye noCaptain Simón Cienfuegos, owabalekela eMelika. Ngenxa yoko, amakhwenkwe amkela ingxelo yebali lothando de kwavela umoya kaBeatriz kuJavier.
Ngaphambi kokuphela kokulungileyo, i-specter yabhala igama u-Amalia eluthulini lwedesika. Okokugqibela, uJavier wawufumana umgexo womqala kwaye wakuqonda ukubandakanyeka kukaNksk. Amalia ekunyamalaleni kwezixhobo. Nangona kunjalo, uVioleta akazange amkholelwe kwaye wacaphuka naye. Ekugqibeleni, le nkwenkwana yanika umalume wakhe uLuis iinyembezi zeShiva, naye owabuyisela amatye kuMendoza.
Ngokubuyiselwa kuka-Beatriz, uGabriel noRosa bakwazi ukuzibophelela. Ukuphela kwexesha lasehlotyeni kufikelele encotsheni ngokuhamba okuqhelekileyo ukuya elwandle kunye nokungahambi kakuhle namapolisa okubangelwe "ngumvukeli" uMargarita. Ngapha koko, uJavier wafumanisa ukuba uVioleta wayethandana naye kwaye-enkosi kwincoko noAzucena- uyavuma ukuba uziva njani ngaye.
Kwiminyaka emihlanu kamva, uRosa noGabriel batshata emva kokugqiba izifundo zabo. Emtshatweni, uRosa wayenxibe ilokhwe kaBeatriz kunye neenyembezi zikaShiva. Ekugqibeleni, kwimigca yokugqibela, kukhankanyiwe ukuba uMargarita wafunda eParis, eAzucena e-NASA kwaye uJavier wabhengeza ukumthanda kwakhe uVioleta xa bathi ndlelantle kwisikhululo sikaloliwe ekupheleni kwehlobo lowe-1969.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iinyembezi zikaShiva
Iindaba ezi-5 zikaNovemba. Abafazi abaNtsundu, iihlaya kunye namabali